Fantasy La Liga: Don - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Fantasy La Liga: Don
Fantasy La Liga: Don
Horyaalka La Liga runtii si fiican ayey u bilaabatay jimcihii hore, ka dib guuldaradii 1-0 ee Barcelona ka soo gaartay Athletic Bilbao, oo ay soo bandhigtay Aritz Aduriz daqiiqaddii 89e. Tani waa markii ugu horreysay ee ay lumiyaan kulankooda furitaanka xilli ciyaareedka tan iyo 2008. Si kastaba ha noqotee, Real Madrid ayaa dib u soo laabatay ka dib xilli ciyaareed aad u xun ka hor si ay uga badiyaan Celta Vigo, 3-1. Ciyaartan waxaa ka mid ahaa caawimaad laga helay Gareth Bale kaasoo la yaab ku ahaa safka bilowga ka dib markii uu ku sugnaa bandhigga xagaaga oo dhan. Labadan koox waa kuwa ugu cadcad Matchweek 2 waxayna wajahayaan Real Betis iyo Real Valladolid - waana meesha ay tahay inaad ku bilowdo markaad dhiseyso isku dheelitirkaaga khiyaali.
Karim Benzema wuxuu ahaa, ilaa iyo haatan, heer aad u fiican heerkii 1 horey usocodka usbuucii hore, kuna dhammeystiray yool iyo baas ka gudbay Celta. Wuxuu kaloo qaatay afar darbo wuxuuna abuuray laba fursadood. Sabtida, wuxuu wajihi doonaa koox si uun uga fogaatay heerka ugu hooseeya xilli ciyaareedkii hore. Si kastaba ha noqotee, waxay ila tahay inay mudan tahay in la sugo bal inaan arko Lionel Messi wuxuu u bilaabayaa Barcelona. Messi ayaa seegay ciyaartii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka sababtoo ah dhaawac kubka ah, iyo waxay umuuqataa taasi awoodaan inaad ku soo laabato garoonka arbacadii. Barcelona ma ciyaari doono ilaa iyo axada, taas oo siinaysa waqti badan si uu qaab fiican ugu ciyaaro. Waxaan ku xusay gudaha aragtidayda Matchweek 1 laakiin waa mid soo noqnoqonaya: Messi ayaa dhaliyay 36 goolal xilli ciyaareedkii hore, 15 in ka badan ciyaaryahan kasta oo ka ciyaara La Liga. Wuxuu sidoo kale ku dhejiyay hogaamiyaha horyaalka isagoo leh dhibco '13'. Marka, haa, way u qalantaa sugitaanka.
Haddii uusan Messi bilaabmin, ma awoodi doontid Luis Suarez . ayaa ku dhaawacmay guuldaradii ka soo gaadhay kooxda Athletic Bilbao. Si kastaba ha ahaatee, Antoine Griezmann waa la heli doonaa. Griezmann wuxuu ku bilaabay bilow niyad jab leh kooxda Barcelona, ​​laakiin wuxuu noqon doonaa gooldhaliyahooda dhexe maqnaanshaha Messi iyo Suarez. Griezmann wuxuu celcelis ahaan dhaliyay xilli ciyaareedkii 18,8 celcelis ahaan shantii sano ee lasoo dhaafay Atletico Madrid.
Dani on Toni
Toddobaadkan, sidoo kale waxaan daawanayaa Real Madrid iyo heerka qadka dhexe ee 1. Toni Kroos wuxuu ahaa cayaaryahankii dhaliyay goolasha ugu badan heerkan maalinta koowaad ee ciyaarta, isagoo uga mahadcelinaya goolkiisii ​​mucjisada ahaa ee uu ka dhaliyay Celta. Weli, kuma tiirsanaan kartid Kroos hadafyada. Xaqiiqdii, isagu ma uusan dhalinin hal gool kulamadii 28 ee xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, isaga oo celcelis ahaan isku celcelis ahaan hal kubad kasta ciyaaray.
Halkii, waan raacaa Dani Parejo kaasoo seegay xilli ciyaareedkii Valencia. 1-1 barbaro ay la gashay Real Sociedad sababtoo ah isku-darka kaararka jaalaha tan iyo xilli ciyaareedkii hore Parejo wuxuu ahaa kubad sameeyaha ugu fiican ee 2018-2019, isagoo ku dhameystay sagaal gool iyo toddobo caawin. Waxa kale oo uu kaalinta saddexaad kaga jiray horyaallada fursadaha la abuuray (81) iyo siddeedaad ee baasaskii la dhammaystiray (52,8 ciyaar kasta). Valencia, oo ku dhameysatay kaalinta afaraad xilli ciyaareedkii hore, ayaa la doorbiday Sabtida iyagoo ka ciyaaraya Celta.
Xullo kooxdii sideedaad ee kula tartami lahayd horyaalada waaweyn ee kubada cagta, Premier League, La Liga ama La Liga MX. Horyaalada, ka dib la dir asxaabtaada ama dadka ka kala yimid adduunka oo dhan. Isku qor bilaash ah!
Ciyaarta ugu xiisaha badan ee Matchweek 1 ayaa ka dhacday Estadio de la Ceramica, barbaro 4-4 ah oo udhaxeysa Villarreal iyo Granada oo dhowaan la dalacsiiyay. Gerard Moreno Santi Cazorla et Samuel Chukwueze de Villarreal wuxuu ku muujiyey qaab ciyaareedkeyga khiyaali ah - seddexdaasna waxay dhaliyeen hal gool. Cazorla wuxuu sidoo kale helay baas muhiim ah wuxuuna helay dhibcaha ugu sarreeya ee khiyaaliga rikoodhka ciyaaryahan kasta oo horyaalka ah.
Waxaan la kulmi doonaa seddexdaas ciyaartoy isbuuca labaad. Villarreal ayaa maqan, laakiin Levante, oo laga dhaliyay goolasha 66 xilli ciyaareedkii hore. Kaliya Rayo Vallecano, oo dib loo dhigay, ayaa laga dhaliyay wax badan (70). Intaa waxaa sii dheer, Levante aad ayuu uga xumaa dhanka daafaca marka aan eegno tirooyinka hoose. Marka la eego xG (yoolalka la filayo) in laga dhaliyay, waxay ku dhammeeyeen 85,27, ugu dhawaan 20 in ka badan kooxaha kale ee horyaalka.
Sergio Ramos Real Madrid (Heerka daafaca 1): Ramos ma uusan helin natiijo aad u wanaagsan isbuucii ugu horeysay ee isbuuca, laakiin wuxuu ahaa daafaca ugu fiican horyaalka xilli ciyaareedkii hore marka loo eego dhibcaha halkii kulanba. Tan ayaa qeyb ahaan sabab u ah waxaa ganaaxey Real Madrid, taasoo fursad weyn siineysa daafaca. Real Madrid ayaa aad loo jecel yahay usbuucan oo waxaan la joogaa Ramos.
Sergio Reguilon Sevilla (heerka difaaca 2): Daafaca bidix ee Sevilla ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay gool iyo gool isagoo caawiyay guushoodii 2-0 ee Espanyol. Goolku ma uusan aheyn mid sabab u ah maxaa yeelay Reguilon shan shuud ayuu ku haystay kooxda heerka ugu sareysa. Waa nin garabka ka ciyaara Real Madrid. Intaa waxaa sii dheer, Sevilla ayaa la doorbiday isbuucaan halka uu ka ciyaarayo Granada.
Jan Oblak Atletico Madrid (Goolhaye): Shan waardiye ayaa lagu cadeeyay Matchweek 1 iyo, sida la filayo, Oblak wuxuu ka mid ahaa. Wuxuu haystay 20 go'yaal nadiif ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay - afar kabadan cidkastoo horyaal. In kasta oo uusan istaagin usbuucii la soo dhaafay, hadana wuxuu kaalinta lixaad kaga jiray horyaalkan xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Waxaan la joogaa Oblak waqtigan halka Atletico Madrid loo jecel yahay inkasta oo ay xaqiiqda tahay inuu ciyaaro Leganes, koox ku guul darreysatay inay garoonkeeda ku dhaliso kulankoodii ugu horreeyay ee ay la ciyaareen Osasuna. .
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/fantasy/story/_/id/27431682/fantasy-la-liga-keep-your-lineup-kroos-control
Lukaku: Aniga, Pogba, Sanchez ayaa ah sawirada
DRC: IMF waxay taageereysaa bukaanka reer Congo inkasta oo miisaaniyada la dhimayo - JeuneAfrique.com